radiosomit.com – Page 3
Liiska golaha wasiirada Cusub ee DegankaOromiya…
Liverpool Oo Isku Diyaarinaysa In suqa kala oo diga…Ay U Dhaqaaqdo Xiddig …
Home»Author: radiosomit.com (Page 3)
Ganacsatada Soomaaliyeed ee lagu xiray Turkiga maxa sababay..?
By radiosomit.com September 22, 2021
Booliska magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa 16-kii bishan waxaa ay xireen ganacsato Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo shalay oo talaada ah lasoo daayay,. Ganacsatada ayaa waxaa loo qabtay in muddo 30 maalmood gudahood ah ay kaga baxaan dalka Turkiga. Safiirka Soomaaliya ee magaalada Ankara Ambassador Jaamac Caydiid ayaa sheegay in Ganacsatada Soomaaliyeed ay dacweeyeen dadka Xaafada ay ku Ganaxsanayeen, balse dadaal farabadan ay sameeyeen kusoo daayeen. Safiirka oo la hadlay voa-da waxaa uu sheegay in sababaha dadkaan loo xiray ay aheyd in ay dalkaasi ku tageen Viisooyin Dalxiis iyo kuwa Ardaynimo, isla markaana dalka Turkiga…
Waxa xabsiga Loo taxabay Dhalinyaro Degmada Gursum…
By radiosomit.com September 21, 2021
Dhalinyaro Degmada Gursum Lagu Xidhxidhay Kadib Markii Ay Soo Bandhigeen Astaan Beeleed. Waxaa magaalada Bambaas ee xarunta degmada Gursum ee gobolka Faafan lagu xidh xidhay koox dhalinyaro ah oo u dabaal dagay islamarkaana soo bandhigay Astaan la sheegay inay leedahay beel soomaaliyeed. Astaantan oo aad u shabahda Calanka deegaanka soomaalida, ayaa dhawaan lagu daahfuray magaalada Nairobi ee dalka kenya. Ka sokow bandhiga astaantan iyo xadhiga dhalinyaradan majirto wax rabshad ah oo ka dhacday magaalada Bambaas. Hadaba akhriste sideed u aragtaa dhacdadan? Fg. RS Radiosomit waxay raadin doontaa xoga dheeriya oo arintan ku saabsan.
Waa kuma Gudoomiyaha 20ka Sanno Horfadhiya Xisbiga UCID …
Gudoomiyaha 20 Sanno Horfadhiya Xisbiga UCID Oo Magacaabis Sameeyay
Shir ay qabkeen Guddiga ka shaqeynaya ka bixitaanka AMISOM ee Somalia…
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga ee Xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Xaaji ayaa maanta Muqdisho shir uga furay Guddi Farsamo oo ka kala Socda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Afrika. Guddigaan ayaa si wadajir ah uga soo shaqeyn doona diyaarinta qorshe howleed ku qotoma sidii Dowladda Soomaaliya ay ula wareegi leheed Amniga Guud ee Dalka. Wasiirka ayaa sheegay in guddigaan uu ka shaqeyn doono sidii sanadka 2022-ka ay AMISOM ammaanka dalka ugu wareejin laheyd ciidanka Qaranka Soomaaliyeed. Guddigaan ayaa seddaxda bilood ee soo socota soo diyaarin doona warbixin ku saabsan la wareegitaanka amniga qaranka ee ciidamada qaranka Soomaaliya, taas oo loo gudbin doono…
Waxa bad badbado aan macqul ahayn, bad baday, Barcelona…
Barcelona ayaa waqtigii geerida ee dhamaadka ciyaarta waxa ay bar bar dhac la galeen Granada oo biloowgii gool uga naxsatay Sheekada labada qeyb: Granda ayaa Barcelona nasiinada ugu dirtay hal gool oo nadiif ah inkastoo Barca guud ahaan ay maamulka kubadda haysteen xilli goolka laga dhaliyay daqiiqadii 2-aad Barcelona dhan waliba ayay u ciqaabeen Granada kubadan uga haysteen hadana waxaa ka maqnaa abuuruista fursadaha saxda waxa ayna qeybtaas hore heerka kubad hayashada Barca gaaresyay %76 Barca inkastoo dhamaadkii fursado xaqiiq ah uu u diiday goolhayaha Granda hadana Arojo ayaa ahaa laacibka kaliya ee ugu halista badnaa qeybtaas Barca waxa ay…
Weerar sababay dhimasho Iyo dhawac badan soo ka dhamacay jamacad ku talo dalka Ruushka…
By radiosomit.com September 20, 2021
Nin hubeysan ayaa maanta rasaas ku furay xarunta jaamacad ku taalla dalka Ruushka, isaga oo dilay ugu yaraan sideed qof, sida ay sheegeen dambi-baarayaasha. Waa toogashadii labaad oo arday lagu beegsado oo sanadkan ka dhacda dalkaas. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad daaqadaha jaamacadda oo ku taalla magaalada Perm kasoo tuuraya agabyadooda kahor inta aanay kasoo boodin. Guddiga baara dambiyada waa weyn, ayaa sheegay in sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay weerarka jaamacadda Perm State National Research University, islamarkaana ninka weerarka fuliyey oo arday ka ah jaamacadda la dhaawacay, lana xiray. Warbaahinta dowladda ayaa baahisay muuqaalka…
Malaysiya oo war kasoo saartay Muwaadinkood…
Wasaaradda arrimaha dibedda ee dalka Malaysia ayaa sheegtay inay si dhow ula socota xarigga iyo hannaanka sharciga ah ee lagu soo rogay nin u dhashay dalkaas oo la sheegay inuu Soomaaliya u soo galay si uu uga biiro kooxda Al-Shabab. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Datuk Saifuddin Abdullah ayaa sheegay in mas’uuliyiinta Safaaradda Malaysia ee Khartuum, Suudaan, ay tageen qunsuliyadda si loo hubiyo daryeelka iyo caafimaadka ninkaas oo loo yaqaan Axmad Mustakim Abdul Hamid. “Wasaaraddu waxay sii wadi doontaa la socodka dhacdooyinka kiiska waxayna siin doontaa mudnaanta koowaad iyada oo hubineysa in mar walba la ilaaliyo xuquuqdiisa iyo inuu helo…
Waxa la shaqiyey Goorta la xukumi doono dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya…
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ee ku aadan dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya lasoo saari doono 12-ka October 2021. Mahdi Guuleed, oo ka mid ah guddiga Soomaaliya ku matalaya dacwadda, ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka ku yiri “Alxamdulillaah,Waxaa farxad ii ah in aan Ummadda Soomaaliyeed la wadaago in Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ay xukunka dacwaddii Badda ee Soomaaliya iyo Kenya soo saari doonto 12ka October, 2021.” Dhul badeedka la isku haysto ayaa dhan 100,000 oo isku wareeg KM ah. Dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadii 2014, xilligii…
By radiosomit.com September 19, 2021
Tababaraha Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa soo saaray shaxda uu kaga hor iman doono Valencia kulan ka tirsan horyaalka La Liga todobaadkii 5-aad. Ancelotti ayay ka maqan yihiin xiddigo muhiim ah kuwaas oo dhaawac kaga maqnaan doona kulankan muhiimka u ah Los Blancos. Waxa shaxda ku bilowday xiddiga Eden Hazard iyada oo uu weerarka ku wehelinayo xiddiga Vini Jr Iyo Karim Benzema. Shaxda Rasmiga Ah Ee Real Madrid ee Kulanka:
Dowladda cusub ee Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sida muuqata xirtay wasaaradda arrimaha haweenka, waxayna ku beddeleen wasaarad ujeedkeedu yahay kor u qaadista akhlaaqda iyo ka-hortagga xumaha. Iridda hore ee dhismaha ay deganeyd wasaaradda arrimaha haweenka ee Kabul, ayaa Jimcihii laga taagay calaamad cusub oo sheegaysa in wixii hadda ka dambeeya ay xarun u noqoneyso “Wasaaradda Wacdigalinta, Hanuuninta, Faafinta Wanaagga iyo Ka-hortagga xumaha.” Taalibaan ayaa sidoo kale dhismaha wasaaraddan ka saartay shaqaalihii barnaamijka xoojinta dhaqaalaha haweenka, kaas oo 100 milyan oo dollar uu ku maalgalliyay Bangida Adduunka, sida uu xaqiijiyay Sharif Akhtar oo ka mid ahaa dadkii sida khasabka ah…